Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » News Sustainability » Ukudibanisa uKhenketho oluZinzileyo naMandla aVuselelekayo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Xanduva • News Sustainability • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
UKhenketho oluZinzileyo naMandla aVuselelekayo
Ukuqhagamshela amashishini anomdla ofanayo, ukuze enze amaqela asebenzisanayo ayonto intsha. Isalathiso kukunika amandla Amandla ahlaziyekayo njengenxalenye yendalo 'yozinzo' kwisindululo soKhenketho noKhenketho ... ngomlinganiselo omkhulu.
Ubume bendalo bonakele kakhulu, kwaye inani elandayo labakhenkethi ngaphambi kweCovid-19 lenze iindawo ezibalaseleyo zabahambi.
Ukuba songeza kungcoliseko lwempembelelo zotshintsho lwemozulu kubandakanya ubhubhane, siyazi kancinci kunempucuko kwindlela enqamlezayo.
Ukuguqula umjelo usuke kwi-fossil uye kwi-Energy eVuselelweyo kuthetha ukuqala emazantsi 'eentambo zokuzinza'.
Emva kwayo yonke loo nto, aMandla aVuselelekayo ebephuma kwimizamo yengca yengingqi engamashumi eminyaka eyadlulayo eya kumthombo wamandla obalulekileyo nosasazeke kakhulu 'oluhlaza' namhlanje.
Amandla ahlaziyekayo kwindalo, kuyazimela kwaye akunamda; akukho sidingo sokuyilwela. Zombini Ukhenketho oluZinzileyo kunye naMandla aVuselelekayo abelana ngeenjongo ezifanayo. Sebenzisa impembelelo yazo, omabini amashishini ayancedisana kwaye ayancedisana.
Indlela yethu yokuzinza ibonakaliswa ngokucacileyo kwimeko yomzimba kunye nokubonakala kwangaphandle kwethu kunye nokusingqongileyo. Imbonakalo ayisoloko imnandi: Izakhiwo ezibolayo, izikwere ezimdaka kunye neendlela ezinamagingxi-gingxi, imilambo engcolileyo kunye neendawo ezigcweleyo ngeebhotile zeplastikhi kunye nenye inkunkuma: ezi zizalathi zezinto ezibonisa ukungakhathali kwabantu abaninzi kunye nokuzimisela okungathethekiyo kwabo bathatha izigqibo.
Ubume bendalo bonakele kakhulu kule minyaka idlulileyo, kwaye inani elandayo labakhenkethi ngaphambi kweCovid-19 lenze izithintelo zoohola bendlela kunye neendawo zabahambi eziqaqambisayo kwiindawo zokhenketho. Ngelixa kwakudala isindululo 'somhlaba ocacileyo' sele silungile ngokwaneleyo ukuba zisebenzise iingcali kunye neendwendwe ukuba zithenge, ungcoliseko lwendalo luyothusa ngokwaneleyo ukuba luqonde: Njengokuba i-entropy ingaphikisani namandla, ukanti ukungabikho kwayo, kunjalo ke nongcoliseko aluchasananga Ucoceko, kodwa ukungabikho kwalo.
Ukuba songeza kungcoliseko lwempembelelo zotshintsho lwemozulu kunye nezinye iingxaki zentlalo, ezoqoqosho kunye nezempilo, kubandakanya ubhubhane, siyazi kancinci kunempucuko kwindlela enqamlezayo, eneempikiswano kunye neendawo zokwakha ezinobunzima. Umbuzo ngulo, ukuqala apho, Ngaphandle kokuba iintlekele ezingalindelekanga zenze ukuba kuthathwe amanyathelo kwangoko?
Naluphi na uhlobo lokuthatha lwenziwa ngamandla-ngaphandle kwamandla kukho ukungena nje, imeko emileyo yemicimbi. Amandla-ukuza kuthi ga ngoku aqhutywa ngamandla yi-athomu, iinkuni kunye namalahle, okanye aphenjelelwa yioyile kunye negesi, khange zibangele intloko kumazwe ethu ahambele phambili. Sasiqhele ukujonga ukubonelelwa kwamandla 'ukusuka kwisokethi' njengoko inikiweyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, nangona kunjalo: Ukusukela ekuqaleni, amandla e-athomu ajongane nomngcipheko wobushushu kunye nengxaki yokugcina inkunkuma yenyukliya. Akumangalisi ukuba amandla eatomiki abe lelona joliso lithandwayo kwiminyhadala yoqhanqalazo, ingakumbi ukusukela oko inani leengozi zenyukliya zaqokelelwa, kunye neChernobyl kwincopho yayo ngo-1986. ukusetyenziswa kwayo ngoxolo yonke into ayinabungozi.
Ngeli xesha saphinda saqonda ukuba amandla weefosili ayonakalisi imeko yethu yendalo kunye nemozulu, kodwa ikwanqunyelwe ekufumanekeni kwawo. Lalifikile ixesha lokuba kufikelelwe kwezinye iindlela zamandla. Izinto ezihlaziyiweyo njengomoya kunye nelanga zenze ukuba ziye kwiincopho zeenkomfa zemozulu, kwaye kungekudala Amandla ahlaziyiweyo afikelele ngaphezulu kwesithathu nangaphezulu kwamandla asetyenziswayo. Indlela ibonakala ivulekele ikamva lamandla acocekileyo, ukuba bekungekho miqobo mincinci kunye nezithintelo ezinkulu ekufuneka zoyisiwe, okokuqala ukukhankanya utshintsho lwemozulu kunye neengxaki zokugcina.